यही हो काफल पाकेसँगै काफल पाकेको सन्देश दिने फिरन्ते चरी, किन कराउँछ ‘काफल पाक्यो ? - Himali Patrika
यही हो काफल पाकेसँगै काफल पाकेको सन्देश दिने फिरन्ते चरी, किन कराउँछ ‘काफल पाक्यो ?
हिमाली पत्रिका २७ चैत्र २०७७, 9:56 am
बेडू पाको बारो मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला…’ भारतको उत्तराखण्ड लगायतको भेगमा प्रसिद्ध यो गीत स्व. मोहन चन्द्र उप्रेतीले लेखेका हुन् । उत्तराखण्डमा चर्चित रहेको यो गीतले काफलको महिमा र काफल पाकेसँगै आउने काफल पाक्यो चरीको व्याख्या गरेको छ । नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी मुलुकमा समेत विशेष रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
नेपाली लोक कथानुसार परापूर्वकालमा बुबाआमा गुमाएका (टुहुरा) दाजुबहिनी थिए । आमाबुबाको देहावसानसँगै गुजाराको अभावमा भोकै बस्नबाध्य दाजुबहिनीमध्ये दाजुले खानाको खोजीमा बाहिर जाने निर्णय गरे । बहिनी झनै रुन थाली । बाबुआमाले छाडेको दाइले पनि छाड्न लाग्नुभयो भनेर बिलौना गर्दा दाजुले काफलको बोट देखाएर काफल पाक्ने समयमा म बहिनी भेट्न आउँछु भनेर निस्किए ।
याम फेरियो बहिनीले जंगलमा फलफूल खाएर समय बिताइ, केही समयमा काफल पनि पाक्यो । तर अफसोच बहिनी छाडेर गएका दाजु फर्किएनन् । बहिनी आत्तिन थाली । एक्लोपनले उनलाई सतायो । काफल पाक्यो बरै मेरा दाजु आएनन् भन्दै उनी बिलौना गर्न थालिन् । त्यही चिन्ताले उनको देहावशासन भयो । अहिले जंगल जंगलमा काफल फाक्यो भन्ने जस्तो आवाज दिने चरा त्यही बहिनीको अर्काे जन्ममा लिएको चरा हो भन्ने लोक कथा छ ।
चैत वैशाखको समय अर्थात् जंगलभरि पाकेको काफलले राताम्मे बनाउने र ‘काफल पाक्यो चरीले’ आफ्नो धुनले जंगल थर्काउने समय हो । काफल विशेषगरी पहाडी भेगमा फल्ने एक किसिमको स्वादिष्ट र पौष्टिक फल हो । यो चैत र वैशाख महिनामा पाक्ने गर्छ ।
तर यसको वैज्ञानिक पक्ष अलिक अर्कै खालको छ । चरा विशेषज्ञ कमल मादेन ‘काफल पाक्यो’भन्ने जस्तो स्वर दिने चरा एक खालको घुमन्ते चरा रहेको बताउँछन् । यसको स्वरमा त्यस्तो आवाज सुनिएको भए पनि यसले काफल पाक्यो भन्ने आवाज भने ननिकाल्ने मादेन बताउँछन् ।
काफल पाक्यो चरीको वैज्ञानिक नाम क्युकुलस माइक्रोप्टेरस हो । यो नेपाल लगायतका दक्षिण एसिया तथा पूर्वी एसियाका केही स्थानहरूमा पाइने गर्छ । यो चरा समुन्द्री सतहबाट ३६०० मिटरसम्मको उचाइमा रहेको जङ्गलहरूमा पाइने गर्छ ।
विशेषगरी नेपालमा चैत वैशाख महिनामा आउने यो चरा थाइल्याण्डमा अरु समयमा पनि कराउने गरेको भेटिएको मादेन बताउँछन् । अरु बेला दक्षिण पूर्वी एसियामा घुम्ने यो चरा वसन्त ऋतु आएपछि नेपाल आउँछ । यही समयमा यहाँ काफल पाक्ने सिजन पनि भएकोले काफल पाक्यो चरा आएको भन्ने भान भए पनि काफल पाक्यो चरा र काफलको प्रत्यक्ष सम्बन्धबारे भने प्रमाणित तथ्य नभेटिएको मादेन बताउँछन् ।
काफल पाक्योको कथा
‘काफल पाक्यो’ चरी नेपाली कविता, आख्यान र उखानमा समेत बिम्बका रुपमा प्रयोग भएको पाइन्छ। ‘प्रजातन्त्रको काफल पाक्यो’ देखि ‘काफल गेडी कुटुक्क’ लगायत धेरै गीतमा काफल र चरी प्रयोग भएका छन्। यही नामको एउटा फिल्मसमेत बनेको छ।
नेपाल र भारतमा काफल पाक्यो चरीमा आधारित प्रशस्तै लोककथा छन्। भारतकाे उत्तराखण्डका स्थानीय त चराको बोलीमा ‘काफल पाक्यो’ मात्रै होइन ‘मैले चाखिन’ समेत सुन्ने गर्छन्। र, त्यसैअनुसारका लोककथा प्रचलित छन्।
वैशाखको सुरुदेखि दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाका पहाडमा काफल पाक्यो चरीको सुरिलो तान सुनिन्छ। बिहानदेखि अबेर रातिसम्म सुसेलेको जस्तो चार नोटको यसको स्वरले धेरैलाई आकर्षित गर्छ।
लोकोक्तिअनुसार यो चराले काफल पाकेको सन्देश सुनाउँछ। नेपाल र उत्तराखण्डमा ‘काफल पाक्यो’ भन्ने यो चराले बांग्लादेशमा भने ‘दुलही केही त बोल’ (बोउ कथा काओ) भन्छ। भारतकै कांगडामा यसको स्वरलाई ‘मेरा भेडा कहाँ गए’ भन्ने मृत गोठालोको आत्मको सोधाइसँग गाँसिन्छ।
चिनियाँले त यसको बोलीमा ‘एक्लो जिन्दगी राम्रो’ देखि ‘सासूले पिट्छिन्’ सम्म भनेको जस्ता अनेक अर्थ लगाउँछन्।
थोरै देखिने र धेरै सुनिने कोइली प्रजातिको यो चराको वैज्ञानिक नाम ‘कुकुलस माइक्रोप्टेरस’ हो। गर्मी र मनसुनमा विचरण गर्ने यो प्रवासी चराको असली ठेगाना पत्ता लगाउनु वैज्ञानिकलाई अझै पनि चुनौती भएको भारतीय वन्यजीव संस्थानका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुरेशकुमार अग्रवाल बताउँछन्।
उनका अनुसार यो चरा गर्मीमा फल पाक्ने बेला मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्डका पहाडी क्षेत्रमा विचरण गर्छ। तर, मनसुन सकिएलगत्तै यी ठाउँमा देखिँदैन। यो कहाँ जान्छ अहिले त्यसबारे अध्ययन भइरहेको अग्रवालको भनाइ छ।
नेपालको पहाडी भेगमा पनि यसलाई आगन्तुक चरा नै मानिन्छ। तर सधैँ हरियो वनमा रहन रुचाउने यो चरा जाडो महिना लाग्न थालेपछि दक्षिणी क्षेत्रका वनतर्फ जाने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्। हिउँदमा यो चराले गीत गाउँदैन, त्यसैले पनि कहाँ छ थाहा हुँदैन।
एनिमल कर्नर डट ओरजीका अनुसार काफल पाक्यो चरीले चीनमा मेदेखि जुलाईसम्म, नेपाल र भारतमा मार्चदेखि अगस्तसम्म, बर्मामा जनवरीदेखि जुनसम्म र मलेसियामा जनवरीदेखि अगस्तसम्म बच्चा कोरल्छ।
एकपटकमा एउटा मात्र अण्डा पार्ने काफल पाक्यो चरीले कोइलीले जस्तै अरु चराका गुँड, खास गरी भ्याकुरको गुँडमा अण्डा पार्छ। कोरलेपछि भ्याकुरले आफ्ना र काफल पाक्यो चरीको चल्लामा कुनै भेदभाव गर्दैन।
हामीले ‘काफल पाक्यो’ भने जस्तो सुन्ने आवाज उसले भालेलाई आकर्षित गर्नका लागि निकालेको हो। यही आवाजबाट भाले आकर्षित हुन्छ, सन्तान वृद्धि हुन्छ। यो आवाजबाट उसले आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गरेको सन्देश अरु प्रजातिका चरालाई दिने पनि गर्छ।
रुखबिरुवामा नोक्सान पुर्याउने किराफट्यांग्रालाई यसले आहारा बनाएर ‘इको सिस्टम’ मा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ।
अहिले भारतीय वनविज्ञान अध्ययन संस्थानले यो चरामा ट्रान्समिटर जडान गरेर यो उड्ने बाटो र यसका बासस्थानबारे एकिन तथ्य पत्ता लगाउने तयारी गरिरहेको छ।
एन्टी अक्सिडेन्टलगायतका स्वास्थ्यवर्धक तत्त्व पाइने काफल पाकेको सन्देश दिने यति रमाइलो चराको संख्या घट्दै गएको छ। यसको संख्या ठ्याक्कै यकिन नभए पनि वातावरण विनाश र जलवायु परिवर्तनका कारण यो चराको संख्या कम हुँदै गएको विज्ञहरु बताउँछन्।